လေးကေ့ကော်မှပြည်သူ ၂၀၀၀ နီးပါးစစ်‌ဘေးရှာင်‌နေရ အရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
လေးကေ့ကော်မှပြည်သူ ၂၀၀၀ နီးပါးစစ်‌ဘေးရှာင်‌နေရ အရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေ
MPA December 16, 2021 1 min read
ကရင်ပြည်နယ်၊ KNU တပ်မဟာ ၆ နယ်မြေအတွင်းရှိ လေးကေ့ကော်မြို့သစ်တွင် တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူ ၂၀၀၀ နီးပါး စစ်ရှောင်နေကြရပြီး လေးကေ့ကော်မြို့သစ်အတွင်း ပိတ်မိနေသူ ပြည်သူ ၅၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း MPA သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
စစ်ဘေးရှောင် ၁၃၀၀ခန့်ကို၄ နေရာ ခွဲထားပြီး စာသင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများတွင် ထားရှိလျက်ရှိသည်။
“ တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူ ၂ ထောင်နီးပါးဖြစ်နေပြီ ပိတ်မိတဲ့လူကလဲ ရာချီရှိနေတယ်။ KNLA တပ်တွေကတော့ ပိတ်မိတဲ့သူတွေကယ်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် “ ဟု မြေပြင်ရောက်ရှိနေသည့် သတင်းထောက်ကဆိုသည်။​
ယာယီနေထိုင်နေရသည့် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် အစားအသောက်၊ ရေသန့်၊​အနွေးထည်၊​စောင်နှင့် အမိုးအကာများ လိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်များကို ကူညီနေသူများကဆိုသည်။
Nearly 2000 from Lay Kay Kaw Fleeing War and In Need of Emergency Help
Nearly 2000 people have become IDPs due to clashes and about 500 people are still trapped in Karen State’s Lay Kay Kaw Myothit which is under the territory of KNU brigade 6, reported by MPA reporter.
Around 1300 IDPs are being separately placed at schools, monasteries and Christian churches.
“Due to clashes, there are nearly 2000 IDPs and hundreds are being trapped. The KNLA forces for preparing to save the trapped ones”, saidareporter on the ground.
In their temporary IDP camps, they are in need of food, drinking water, warming clothing, blankets and shelters, said those who are helping the IDPs.
Tags: IDPs KayinState LayKayKaw MPA Pressphoto
Previous: စစ်ကောင်စီကျင်းပနေသော ရခိုင် ပြည်နယ်နေ့